प्रमुख,मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्दै गए प्रदेशका चार बर्ष,राज्यकोषमाथि भार थपिदै – KhojPatrika
प्रमुख,मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्दै गए प्रदेशका चार बर्ष,राज्यकोषमाथि भार थपिदै
खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ कार्तिक २५, २२ :१९ बजे
हाम्रो देशको प्रदेश संरचना प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न नै बनाइएको हो त ? उनीहरुको आसेपासे, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र देशको बजेट दुरुपयोग गर्न देश संघीय संरचनामा गएको हो त ? सिंहदरबार धेरै टाढा भयो । नजिक पनि सिंहदरबार बनाइयो भने जनताका आवाज सुनिन्छन् र समस्यामा परेका नागरिकले छिट्टै राहात पाउलान भन्नका लागि परिकल्पना गरिएको होला साहेद । तर, यहाँ त केन्द्रमा भाग पुगेन प्रदेशमा पनि बाँडिचुडी खानुपर्छ भन्दै अंश मिलाउन बनाइए जस्तो पो भइरहेको छ त ।
सरकार फेरबदल,मन्त्री बन्न तछाड मछाड र प्रदेश प्रमुख हटाउने र नियुक्त गर्ने खेलले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । संघीय सरंचनाको मेरुदण्ड मानिएको प्रदेश केन्द्रको छाँयाजस्तो बनेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीमा केन्द्र सरकारको मनलाग्दी छ । प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग भएपनि दलीय स्वार्थका आधारमा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्ति भइरहेको छ ।
केन्द्रमा सरकार चलाउने पार्टीसँग आबद्धता नभए प्रदेश प्रमुखले विदा हुनुपर्ने नजिर बसेको छ । यही कारण प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा गएको ४ वर्ष नपुग्दै केही प्रदेशमा चार जनासम्म प्रदेश प्रमुख फेरिए । पहिलो कार्यकाल पुरा नहुँदै अहिलेसम्म सात प्रदेशले २४ जना प्रदेश प्रमुख झेल्नुपरेको छ । प्रदेश प्रमुखको मात्रै होइन यो चार बर्षमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १ सय २४ जना मन्त्री प्रदेश झेलेको छ । प्रदेश १ र बागमतीमा त ३÷३ जना मुख्यमन्त्री बनेर राज्यकोषमाथि भार थोपारिदिए ।
अझै पुगेको छैन् कर्णाली,बागमती र प्रदेश १ मा मन्त्री बन्न तछाड मछाड चलेकै छ । मन्त्री बन्ने र बनाउनेहरुको लामै लिष्ट छ । कतिपय प्रदेशमा त मन्त्रालय नै टुक्रा बनाएर पद बाँडिदैछ । यसैले पुष्टी गर्छ प्रदेश संरचना दलीय स्वार्थ, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र नेताहरुले अवसर पाउने ठाउँ नै हो । कुनै प्रदेशमा समस्या परे संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकार कहाँ हराउछ पत्तै हुँदैन । तर, पनि मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउदै साइरन बजाउदै हुइकिनेहरुको कमी छैन् । घरदैलोको सरकार राज्यलाई भार थोपारेको थोपारै छ । तर, जनताको दैनिकीमा परिवर्तन होइन आफू मन्त्री भए घर गाडी भने फेरेकै छन् ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, सम्पादकीय
काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने मानबहादुर नेपालीको घोषणा
नेपालमा पनि भित्रियो कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट,संक्रमणबाट बच्न यी उपाय अपनाऔं